I-SonoStation - Ukusethwa kwePump Solution Settle ye-Hielscher's
Izinqubo ze-Ultrasonic zisetshenziswa kabanzi ezimbonini ezinhlobonhlobo zokuxuba, ukuhlakaza, ukusabalalisa i-homogenisation kanye nokukhishwa. Ngenkathi imiqobelo emincane ingabhalwa kalula kumodi ye-batch, ngoba izinqubo zevolumu ezinkulu zinconywa. I-SonoStation iyisethi ephelele yokuziqhenya egcwele eyakhiwe enethini elalugqokile ngejacket epholisa, ipompo kanye nezinhlelo zokusebenza ze-ultrasonic ezinama-flow cell. Idizayini eyinkimbinkimbi ye-SonoStation yisisombululo esivele ngokugcwele senqubo ephumelelayo ye-ultrasonic.
I-SonoStation, Uhlelo lwakho Lokuxubha Olusha – Elula!
Ukucutshungulwa kwe-Ultrasonic Kwenziwe lula nge-SonoStation
Ukuphathwa kwe-Ultrasonic isinyathelo esisodwa nje ekuthuthukisweni kwenqubo yakho noma ekukhiqizeni kwansuku zonke. Ukufakwa nokusebenza kwe-reactionor ye-ultrasonic kufanele kube lula ngangokunokwenzeka. I-SonoStation uhlelo lokupompa olusebenziseka kalula ukuze uhambise izinto zakho eziwuketshezi kusisi esisebenzisayo se-ultrasonic ekuhambeni okungapheli nokucindezela okungapheli. Sihlanganise ithangi (iJacket) elinamandla angama-38L nephampu ye-patity eqhubekayo kwisistimu yokusebenzisa amaselula. Siphinde safaka nokuma okufika kuma-reactors amabili e-ultrasonic. Leli zinga eliphakeme lokuhlanganiswa linciphisa inani nosayizi noma izingxenye ezimanzi, ukufakwa nezixhumi. Lokhu kwenza ukuthi i-SonoStation isebenziseke kalula futhi kulula ukuyihlanza kunokusetha okuvamile. Iyanciphisa ukuphrinta ezinyaweni futhi.
Kodwa-ke, lokhu kwalula akubangelwa ukusebenza okulinganiselwe. Ngalesi sizathu, amadivaysi ethu e-ultrasonic eza nezici, njengokufaka imvamisa okuzenzakalelayo, ukuvumelanisa idatha okuzenzakalelayo, ukulawulwa kwe-amplitude okuzenzakalelayo nokuphepha kokuqina ukuze ukwazi ukugxila kwinqubo yakho.
Ngenkathi amadivaysi ethu e-ultrasonic eyimishini yokucubungula eyinkimbinkimbi, engasetshenziswa ngokuthembekile njengethuluzi lokuxazulula elilodwa, ukuwahlanganisa ekusethweni okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe kuvumela ukuthuthukisa inqubo ephelele yokwenza. I-SonoStation isethi ephelele yokusetshenziselwa equkethe ithangi elivuselelekile, ipompo nokuqhubeka kwe-ultrasonication. I-SonoStation iyisethi ephelele, icwecwe futhi enamandla enika amandla izinqubo ze-ultrasonic ezilinganisweni zobukhulu obuphakathi.
Ukuqanjwa ngokuphelele kokuqanjwa kweSonoStation kukusiza ukuba uthuthuke ngokushesha!
ukusetha okuphelele kokusebenza
indawo encane yonyawo
inamandla afinyelela ku-4kW sonication (2x UIP500hdT kuya ku-UIP2000hdT)
amandla okusebenzisa nsuku zonke (umshayeli wendiza noma ukukhiqiza)
nezimo zokuthuthuka kwenqubo
ithangi lensimbi engenacala nejazi elipholile
akukho kudlengiswa njengamaphampu agobile
Ngokusethwa kokukhiqizwa kwe-ultrasonic, udinga ngaphandle kwe-ultrasonicator futhi nezinto zokwengeza njengamathangi, iphampu,… I-SonoStation isethi ephelele yokwenza ukucubungula okukuthola usulungele ukukhiqizwa masinyane!
I-Hielscher ngokukhethekile ngamadivayisi we-ultrasonic ngezinqubo ze-liquid. Ama-ultrasonic inline reactors adinga izesekeli, ezifana nethangi, iphampu, ukushisa, i-valve, izinzwa zokucindezela. Ukuze wenze lula ukusetha nokusebenza, sinikeza izesekeli ezenzelwe izinqubo ze-sonication. Ukusethwa kweSonoStation kufaka i-pneumatic pinch valve ne-diaphragm yensimbi engagqwali yensimbi ye-PS7. Besifuna ukuthuthukisa ukuphathwa kwetshezi.
SonoStation – Isethaphu ephelele yokucubungula i-ultrasonic enethangi, ipompo, i-agitator ne-ultrasonicator
I-SonoStation ifakwe yi-UIP1000hdT ye-ultrasonicator kanye ne-flow cell reaction
SonoStation – uhlelo lwe-ultrasonic, lapha lune-2x ultrasonicators 2kW, I-tank eyenzelwe ukuvuselela kanye ne-pump iyindlela esebenziseka kalula yomsebenzisi yokuxuba, ukuskaya nokusabalalisa izinhlelo zokusebenza.
Sisebenzela wena, ngakho-ke wenza okuningi kwenziwe ngokushesha okusheshayo. Kungani kufanele ukuthi ufune zonke izakhi ezisuselwa ezincwadini zethu?
Ama-Hielscher ama-homogenizer e-Hielscher akhiqiza i-sonication eguquguqukayo nephindaphindekayo yokuthuthuka kwenqubo nokukhiqiza.
Imininingwane Yobuchwepheshe ye-SonoStation:
I-230VAC noma i-115VAC
isigaba esisodwa sokuphuma kodonga okujwayelekile
umgodi we-cavity oqhubekayo wokugeleza njalo nokucindezela okungapheli
nge-VFD, 40 kuye ku-495RPM
umthamo ophakeme, ngisho noqhoqhoqho
Ithangi leSonoStation ithangi lensimbi engu-38L. Ifakwe ngejakhethi yokupholisa / yokufudumeza yokulawula okushisayo. Isibonelo, ukuyisebenzisa njengejakhethi yokupholisa kuqinisekisa ukuthi izinto ezishisayo azibhaki ezindongeni zethangi futhi azinamatheli odongeni lwayo. Ukuma kwaso okuxubekile kugwema ukudilizwa kwezinhlayiya. Ukugibela kuma-swivel casters (amasondo) avumela ukunyakaza kokuqondisa okuyi-360 degree futhi aqinisekise ukuqondakala ngisho nasezikhala eziqinile. Ngaphezu kokuhamba, amabhuleki e-caster aqinile avumela ukukhiyelwa okuvikelekile kwamasondo ukuze iSonoStation ihlale ivikelekile endaweni oyifunayo. Ukugcina iyunithi iphephile kahle kubaluleke kakhulu kuzinhlelo zokusebenza.
Ama-Hielscher ama-reactors ama-ultrasonic axube, ama-homogenize kanye nezinto zokugaya u-mill. Ngokusetha okulula nokuphatha, saklama iVerticalPump50. Lokhu kusethwa okuhlanganisiwe kuhlanganisa ithangi lokubamba elivuselelekile le-50L nephampu ye-cavity eqhubekayo. Ukulula, ukusebenziseka kalula kanye nokuqina kwezimpawu kuyizici ezibalulekile zokwakhiwa kwalesi siteshi sokupompa.
Imininingwane yalesi Siga:
SonoStation – ukusethwa kokusetshelwa kwe-ultrasonic kwezicelo ezilungiselelwe-inqubo
Ijubane le-agitator liyakwazi ukuguqulwa futhi lingakhipha kuze kufike ku-500RPM, ngaleyo ndlela ikwazi ukunikeza ukuhlangana okuhle koketshezi notshwala okuhambisa impahla ethangini. Ukuphaphama okuthembekile kuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kuthuthelwa ngokufana ku-rectaos yama-ultrasonic flow futhi kusetshenzwe.
I-SonoStation iyahambelana nama-ultrasonicators ebanga lezimboni i-UIP500hdT (500 Watts), UIP1000hdT (1000 Watts), UIP1500hdT (1500 watts), ne-UIP2000hdT. I-SonoStation ngayinye ingabamba futhi isebenze ngephrosesa eyodwa noma ezimbili ze-ultrasonic. Ngokuhlomisa i-SonoStation ngawodwana namandla e-ultrasonic alungiswa kuzidingo zakho zenqubo iqinisekisa ukuthi uthola ukusetha okulungile!
Iphampu ye-SonoStation idlulisa uketshezi noma i-slurry in the ngokusebenzisa i-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactors. Ngokuhambisana nezinto ezingavuthiwe kanye nenqubo okuhlosiwe ngayo, ama-ultrasonicators angahlelwa ngesimo esihle sokuphenya nokugeleza kweseli. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes / cascatrodes kanye ne-flow cell reactors zitholakala kalula.
Onke ama-ultrasonicators ebanga lezimboni avumela ukulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha wenqubo ebalulekile anjenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi se-sonication. Lokhu kwenza inqubo ye-ultrasonic ithembeke futhi ifinyeleleke kabusha. I-Hielscher Ultrasonics iyazi ngokubaluleka kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo futhi isekela abakhiqizi ukusebenzisa inqubo yokuma kanye ne-GMP (Izenzo Ezinhle Zokukhiqiza) nge-software ehlakaniphile nokuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo. Ama-homogenizer ethu edijithali arekhoda ngokuzenzakalelayo wonke amapharamitha enqubo we-ultrasonic ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Izithombisi zokuthinta kwedijithali kanye nokulawulwa kude kwesiphequluli kuvumela ukuqhubeka nokubheka inqubo futhi inike amandla ukulungisa amapharamitha wenqubo ngokunembile noma nini lapho kudingeka. Lokhu kusiza ukuqapha kwenqubo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kakhulu.
Imishini ye-Hielscher's ultrasonic yenzelwe umsebenzisi-ubungane, ukusebenza okuphezulu kanye nokuqina. Onke ama-ultrasonicators akhelwe ukusebenza okungu-24/7 emsebenzini osindayo ezindaweni ezifunwayo futhi abe nemijikelezo yempilo ende yokulungiswa okuphansi.
Ithebula elingezansi likunikeza inkomba yamandla acubungula ukucubungula we-ultrasonicators ethu ahambisanayo neSonoStation:
0.25 kuya ku-5L 50mL / imizuzu ukuya ku-1L / min UIP500hdT
0.5 kuya ku-10L I-100mL / imizuzu ukuya ku-2L / min I-UIP1000hdT
0.75 kuya ku-15L 200mL / imizuzu kuya ku-3L / min UIP1500hdT
I I-UIP2000hdT iyi-processor enamandla ka-2000 Watts enamandla, engafakwa ku-SonoStation
industrial processors ultrasonic UIP500hdT, I-UIP1000hdT futhi UIP1500hdT ngama-Cascatrodes nama-flow cell reaction
Ngabe Ukuxubha Okuphezulu Kanjani Nge-Sonication Kusebenza?
Ama-homogenizer e-Ultrasonic, abaxubeli be-shear ephezulu kanye nabahlukanisi basebenzisa inqubo efanayo yemishini njengezinqubo zokuxuba zezimboni ezinjengesivinini esikhulu se-rotor mixers, ama-multi-shaft mixers, ama-colloid mill, ama-homogenizer aphezulu, nezinhlelo ze-impeller zenza. Izinhlelo zokuxuba ze-Ultrasonic zisetshenziselwa ukusabalalisa nezinhlayiya zemishini, ukufakwa kwezigaba kawoyela namanzi, ukufaka amanzi endaweni eqinile nokukhiqiza ingxubevange yanoma yiluphi uhlobo lwezinto ezenziwe ngotshwala nakuma-slurries. Ama-homogenizer e-Ultrasonic ahlanganisa i-probe ye-ultrasonic, eyaziwa nangokuthi yi-sonotrode, kumkhumbi wokuxuba, onjengethangi le-batch noma kwiseli yokugeleza. I-probe ye-ultrasonic idlulisa ukuvezwa kokuvama okuphezulu kakhulu kube uketshezi noma i-slurry futhi idale i-acoustic cavitation eqinile ku-ketshezi. Ukufakwa kwamabhamuza e-cavitation kuphumela emandleni amakhulu e-shear, okuphazamisa futhi kuphule amaconsi, ama-agglomerates, ama-aggregates, futhi nezinhlayiya eziyinhloko. Njengoba i-ultrasonic cavitation ikhiqiza ukusakazwa okuphezulu kwe-velocity cavitational okufika ku-1000km / h, amajezi we-cavitational liquid asheshisa izinhlayiya. Lapho izinhlayiya ezisheshayo zishayisana, isenzo leso siyimidiya yokugaya. Kamuva, izinhlayiya ezingqubuzanayo ziyaqhekeka futhi zincishiswa zibe usayizi we-micron- noma we-nano-size. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-4 mixer blade sizodinga ukusebenza ku-300,000 RPM ukufezekisa imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile be-rotary nabahlanganisi be-rotor-stator abakhi mali enkulu ye-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane.